नेपाली समाजमा क्रान्तिको एउटा चरण पुरा भएको डा.बाबुराम भट्टराईको भनाई
रामेछाप । माघ २२ गते,
पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले नेपाली समाजमा क्रान्तिको एउटा चरण पुरा भएको बताएका छन् । राजनितिक क्रान्तिको यो चरणलाई टेकेर विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रवेश गर्न नयाँ सोच र दृष्टिकोण आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।
जनसंवाद अभियान अन्तरगत मंगलबार रामेछापको सदरमुकाम मन्थली आएका डा.भट्टाईले राज्यको सत्ता संचालन चुनाव गर्ने र विचका विचौलीयाले कमिसन खाने र फेरी सत्तामा जाने गोलचक्करमा फसेको बताए । यसबाट बाहिर निस्कन पुरानो संरचनालाई तोड्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
डा.भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिय प्रणाली नेपालको उपयुक्त शासन प्रणाली हुने बताए । डा. बाबुराम भट्टराई जनसंवाद अभियान अन्तरर्गत पुर्व पाँचथरको चिवा भञ्ज्याङदेखि मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै नवौदिनका दिन रामेछाप आएका हुन् । एक महिने अभियानमा निस्किएका डा. भट्टराई बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्ने कार्यक्रम रहेको नयाँशक्ति पार्टीले जनाएको छ ।